UMantshi Wesula Ilayisensi Yomtshado kaTsvangirai
Saturday, May 18, 2013 Local time: 15:37
Umtshado KaTsvangirai Susezandleni zeHigh Court
HARARE — Idale likamantshi ngoLwesihlanu lesule ilayisensi ebinika inhloko kahulumende uMnu Morgan Tsvangirai imvumo yokutshada loNkosazana Elizabeth Macheka ngoMgqibelo.
UNkosikazi Locardia Karimatsenga nguye ocele idale ukuthi limise lumtshado esithi nguye umkaTsvangirai ngaphansi komthetho wesintu, iCustomary Law.
Esethula isinqumo sakhe, umantshi uMnu Munamato Mutevedzi uthe umtshado lo ngeke uqhubekele phambili ngoba ubufakazi obuvezwe phambi kwenkundla kuveze ukuthi ngempela ababili laba bathathana njalo abazange beyalane okusemthethweni.
Udaba Lusethulwa NguMark Nthambe
Igqwetha likaNkosikazi Karimatsenga, uMnu Everton Samkange uthi bajabule kakhulu ngesinqumo lesi.
Kodwa amagqwetha kaTsvangirai aphange aphikisa isinqumo sikamantshi edale leHigh Court.
Ngaphandle kukaKarimatsenga, kulomunye njalo owesifazana oyisizalwane seSouth Africa uNkosazana Nosipho Regina obecele inkantolo ukuthi ivimbe lumtshado esithi uTsvangirai wamthembisa umtshado.
Kodwa umantshi ululahlile loludaba esithi alulasisindo. IMDC ekhokhelwa nguMnu Tsvangirai ithi kungelani lokwesulwa kwelayisensi yomtshado, imithimba ebivele iqoqiwe izaqhubekela phambili.
Abanye babakhokheli bamanye amazwe abaxuswe kulumtshado abagoqela uMongameli Ian Khama weBotswana loMongameli weleTanzania uMnu Jakaya Kikwete bafike eHarare ngoLwesihlanu.
Ingcwethi kwezemithetho, uMnu Matshobana Ncube utshele iStudio 7 ukuthi kaboni ukuphikisa isinqumo sikamantshi okwenziwe ngamagqwetha kaTsvangirai kumnceda.